Shirweyne looga hadlayay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen carruurta ku jirta xeryaha qaxootiga oo lagu qabtay Jabuuti – Radio Muqdisho
Shirweyne looga hadlayay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen carruurta ku jirta xeryaha qaxootiga oo lagu qabtay Jabuuti
Shirweyne looga hadlayay sidii carruurta ku dhalata xeryaha Qaxtootiga ee ku yaala Geeska Afrika loogu heli lahaa adeeg waxbaraso ayaa ka furmay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Shirka waxaa ka soo qeygalay Wasiirada iyo wasiir ku-xigeenanda Waxbarashada ee dalalka Geeska Afrika, Wakiilo ka socday beesha caalamka, mas’uuliyiinta hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Qaxootiga ee UNHCR iyo marti sharaf kale.
Kulanka waxaa ugu horey ka hadlay Xogyaha guud ee Urur Goboleedka IGAD Maxbuub Macalin ayaa sheegay in shirka uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dhallinta ku dhalata xeryaha Qaxootiga inay helaan waxbarasho.
Mustafa Maxamed Maxamuud Wasiirka Waxbarashada ee Jabuuti oo shirka ka hadlay ayaa soo dhaweyn u mujiiyay Madaxdii shika ka soo qeyb gashay.
Madaxa Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ayaa sheegay in kulanka uu ahmiyad gaar ah siinayo carruurta qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dalalka geeska Afrika ku yaala.
Shirka waxaa looga dooday sida loo jiheyn karo waxbarashada dhallinyarada, isla markaana ay wax ku bartaan manhajka hadba dalka ay ku noolyihiin oo ay Qaxootiga ku yihiin.
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Jabuuti Mudane Cabdiqaadir Kaamil Maxamed aya sheegay in kulanka uu muhiimad gaar ah u leeyahay isdhexgalka iyo wada noolaanshiyaha bulshada ku nool wadamada geeska Afrika, isla markaana xoogga lagu saarayo sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen dhalinta xeryaha qaxoogita ku nool, si la mid ah kuwa dalalka Geeska Afrika u dhashay oo kale.
Wasiiradii shirka ka qeyb galay ayaa waxa ay halkaasi ku wada saxiixdeen heshiis ku saabsan in dhalinta xeryaha Qaxootiga wadamada Geeska Afrika ku nool ay u heli lahaayeen adeegyo Waxbarasho oo tayaysan.
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in marka Qaxootiga dalkooda loogu soo celiyo ay u baahanyihiin waxbarasho, waxaana uu intaa ku daray in Wasaraddu ay xoogga saareyso sidii adeeg waxbarasho oo lacag la’aan ah ay u heli lahaayeen dhallinta Soomaaliyeed.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Soomaaliya oo dhankiisa saxiixay heshiisan.